Lalao « Ligue des champions : tonga amin’ny manasa-dalana ny AS Monaco | NewsMada
Lalao « Ligue des champions : tonga amin’ny manasa-dalana ny AS Monaco
Sambany ahitana ekipa frantsay, taorian’ny 2010, nisy tafakatra eo amin’ny dingana manasa-dalana ny fiadiana ny « Ligue des champions ». Tonga amin’izany dingana izany ny AS Monaco rehefa nandavo ny Borussia Dortmund, tamin’ny isa 3 – 1, lalao tany Monaco. Tsiahivina fa efa resin’ny AS Monaco ihany ireo ekipa alemà ireo tamin’ny lalao mandroso 3 – 2. Nisongadina hatrany amin’ireo mpilalaon’ny AS Monaco ilay tovolahy vao 18 taona, Kylian Mbappé, nahafaty baolina dimy tamin’ny lalao efatra nifanintsanana nandraisany anjara.
Iza amin’ny Real Madrid, Atlético Madrid na Juventus ary izao no hifampitàna amin’ny AS Monaco amin’ny lalao manasa-dalana? Nampahalala ry zareo Frantsay fa na iza na iza ny hifanandrina aminy, tsy hikoso-maso ry zareo. Faninfetra izao ity ekipa frantsay ity tonga amin’izany manasa-dalana izany; talohan’izao ny tamin’ny taom-pilalaovana 1993-1994, 1997-1998 ary 2003-2004.
Tsy nahita hirika ry Messi
Tsy nahita hirika mihitsy kosa ry Messi sy ny namany ao amin’ny FC Barcelone , nandritra ny lalao miverina tany aminy nihaonany tamin’ny Juventus. Nisaraka ady sahala ny roa tonta, 0-0 tamin’io lalao miverina io. Efa gorobaka 3 – 0 be izao ry zareo FC Barcelone tamin’ny lalao mandroso tany Italia.
Tsy hita intsony fahagagana vitan’ny FC Barcelone tahaka ny namelezany an’ny PSG. Efa resin’ny PSG tamin’ny isa 4-0 ry zareo tamin’ny lalao mandroso, saingy nomontsaniny 6-1 tamin’ny lalao miverina.